हप्तामा कतिपल्ट शा रिरिक स म्प र्क गर्दा बच्चा बस्छ ? बाँझोपनाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब भिडियो सहित.. – Nayabook
हप्तामा कतिपल्ट शा रिरिक स म्प र्क गर्दा बच्चा बस्छ ? बाँझोपनाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब भिडियो सहित..
डा. सबिना सिम्खडाले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो । तीन बर्षमा हजारौं निःसन्तानको पीडा खेपेका महिलाहरुलाई आमा बन्न सह योग गरेकी छन् । निःसन्तानपन भएर उपचारको लागी ने पाल बाहिर जानेहरुलाई नेपालमै उपचार संभव छ भनेर देखाएकी छन् । पछिल्लो समय निःसन्तानपन (बाँझोप ना)को बारेमा जनचेतना फैलाउँदै त्यसबाट जोगिन समेत डा. सिम्खडा आग्रह गर्छिन् ।
बिहे गरेको एक बर्ष सम्म पनि कुनै पनि अस्थिाई साधनको प्रयोग बिना शारिरक स*म्पर्क गर्दा बच्चा बसेन भने बाँझो पना हुने डा. सिम्खडा बताउँछिन् । उमेर जति बढ्दै गयो उत्तिकै बाझोपना हुने संभावना हुन्छ ।उमेरको हकमा ३० बर्ष माथि अझ बढी जोखिम हुने संभावना रहन्छ । दैनिक जस्तो शारिरिक सम्पर्क गर्दा वा महिनावारी भएको १० दे खी २० दिन भित्र सम्पर्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउन उनी आग्रह गर्छिन् ।
पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भार तबाट बाझोपनाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा. सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भार तीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । हामीले उनी प्रजनन् बिशेषज्ञ डा. सबिना सिम्खडासंग बाँझोपना र प्रजननको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं। हेरौ यो कुराकानी..***